Hetsika Nanoheran’ny Mponin’ny Alina Ao Zeorzia An’ireo Nasiônalista · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Mey 2018 11:59 GMT
Tezitra tamin'ny bemidina nataon'ny polisy tany amin'ny trano fandihizana alina, an'arivo ireo mpandihy amin'ny alina sy mpikatroka liberaly no naka ny fifehezana ny arabe teo ivelan'ny parlemanta ary nanao fandihizana tsy nisy fiomanana, ny 12 sy 13 May. Nanisy voninkazo camomille teny amin'ny volony ny sasany tamin'izy ireo. Sary avy amin'i Giorgi Lomdaze ho an'ny Eurasianet.
Lahatsoratra fiarahamiasa avy amin'ny Eurasianet.org ito manaraka ito, nosoratan'i Giorgi Lomsadze. Naverina navoaka miaraka amin'ny fahazoandàlana.
Niakatra be ny ady mahery momba ny kolontsaina ao Zeorzia tamin'ny faran'ny herinandro teo taorian'ny bemidin'ny polisy tao amin'ny toerampandihizana amin'ny alina narahan'ny fifanandrinana mahery teo amin'ireo mpiaro ny fiainan'ny renivohitra, ny fiainana malalaka amin'ny alina ary ny vondrona radikaly farany havanana.
Zara raha nahavita nitazona ny fandriampahalemana teo amin'ireo fihetsiketsehana roa nanao fanehoankery tao amin'ny afovoan'i Tbilisi tamin'ny 13 May ny fisian'ireo polisy maromaro, raha nipoaka ho lasa fanoherana be momba ny fahalalahana manokana sy ny maha-olompirenena ny fanoherana an'ily bemidina hiadiana amin'ny zava-mahadomelina tao amin'ireo toerampandihizana roa.
“Ambivitra kely no tsy nidirantsika tamin'ny fifandonan'ny samy sivily ” hoy ny Filoha Giorgi Margvelashvili tamin'ny tafa ho an'ny gazety ny ampitson'io.
Eo afovoan'ilay fifanoherana no misy ny toerampandihizana Bassiani, izay nahazo laza manerantany ho voalohan'ny toerampandihizana tsara indrindra ao Eoropa ary iray amin'ireo toerana ao an-tanàna mahasarika indrindra an'ireo tanora mpizaha tany maharaka erantany.
Ao Zeorzia, i Bassiani no mpitarikan'ny revôlosiona ara-kolontsaina, manampy mamorona hatanorana liam-pivoarana miafina mifanohitra amin'ny tontolo mazàna mpifikitra amin'ny tanindrazana, mankahala vazaha sy ireo mpitia mitovy fananana any amin'ny sisan'ny firenena. Manasongadina ny anjara toerany ao anatin'ny ady ara-kolontsaina ao Zeorzia, naka ny anarany avy amin'ny ady lehibe tamin'ny taonjato 13 ilay klioba.
Nandritra ny taona maro faramparany teo, nihangeza ny hantsana ara-kolontsaina eo amin'ny samy Zeorziana. Tao anaty fotoana fohy dia fohy, niova tanteraka ny paosin'ny firenena: filalaovana ho an'ny tanora liberaly izao ny faritra afovoany haingam-pandroso ao Tbilisi, miaraka amin'ny toetra izay tena tsy mitovy amin'ny mahazatra raha resaka momba ny fananahana, ny andraikitrin'ny lahy sy vavy ary koa ny fomba fisakafoanana . Lasa fahita andavanandro ao Tbilisi ireo mpitsoaponenana, miaraka amin'ireo olona manana volonkoditra matroka kokoa avy ao Afovoany Atsinanana, Azia Atsimo, na Afrika. Ary misy hetsika vao mitombo mangataka ny fanalalahana an'ireo lalàna momba ny zava-mahadomelina, na dia ny rongony no kendrena kokoa noho ny zava-mahadomelina mahery hafa.
Izao no nahatonga an'ireo mpandala ny mahazatra Zeorziana tsy nahazo aina, ary nitarika valiny, isan'izany ny avy amin'ny hetsikanà mpikatroka avy amin'ny farany havanana.
Nanomboka taorian'ny fahafatesana mifanesy nanjo an'ireo mpandeha toeram-pandfihizana amin'ny alina, notsiniana ho noho ny fihinana tafahoatra ny zava-mahadomelina misy mephedrone, tamin'ny voalohandohan'ny volana.
Ny vao maraimben'ny 12 May, novalian'ny Polisy tamin'ny famelezana ny Bassiani sy klioba iray hafa, Café Gallery, nisintona an'ireo mpanao fety ary nisambotra marobe. “Manana rakitsary 20 nà fivarotana zava-mahadomelina anaty klioba… izahay. Voatery nanao bemidia tany amin'ireo klioba izahay” hoy ny Minisitrin'ny Atitany Giorgi Gakharia.
Betsaka no nanakiana an'ilay famoretana ho hetsika dokambarotra ary avy eo nivoaka fa tany ivelan'ny faritry ny klioba no nisy ireo olona valo nosamborina noh ny fitazonana zava-mahadomelina, mahatonga an'ireo fanaovana bemidina mahery ireo ho tsisy nisy nilàna azy.
Tezitra tamin'ireo bemidina ireo, nidina an-dalambe ny mpandeha klioba aman'arivony, teo ivelan'ny parlemanta tamin'ny Sabotsy hariva. Mandihy amin'ny mozika elektronika izay maneno amin'ny fanamafisampeo ngeza be, nanova ny afovoàn-tanàna ho toerampandihizana ho an'ny sisan'ny faran'herinandro ireo mpanao fihetsiketsehana mpifety. Mangataka ny fialàn'ny minisitrin'ny atitany sy ny praiminisitra, mitondra sora-baventy mivaky hoe “Tsy Heloka Ny Mandihy”, “Aza Velesina Aho, Mandihiza Miaraka Amiko”, ary “Raha Tsy Afaka Mankeny Bassiani Izahay, Bassiani No Mankaty Aminay.”
Fampisehoana natao teo alohan'ny Parlemanta Zeorziana ahitana ny mpanao fihetsiketsehina mandihy aminà mozika elektronika taorian'ilay bemidina omaly natao tany amin'ny toerampandihizana amin'ny alina #Bassiani #tbilisi
Ny polisim-panjakàna no olanay… izay efa niainanay teto taona maro izay ary ilay bemidina tamin'ny 12 May no vavolombelona iray hafa amin'io”, hoy Beka Tsikarishvili, iray amin'ireo mpikarakara an'ilay famoriambahoaka mitarika ny Hetsika Tabataba Fotsy, fiarahamientana avy eny ifotony manosika ho amin'ny plitika fanalalahana ny zava-mahadomelina, tamin'ny vahoaka.
Samy nanandra-peo am-piraisankina ireo DJ malaza Eoropeana. “Ato am-poko i Bassiani, mampalahelo ahy ny mahita ireo rahavaviko sy anadahiko atao tahaky ny mpanao heloka bevava”, hoy ny DJ Soedoa, Joe Mull, nanoratra teo amin'ny Facebook. “Mahereza ry Bassiani”, hoy ilay Alemà artista mpanao techno, Ben Klock.
Nanomboka niharatsy ny zavatra tamin'ny Alahady, rehefa nanohy ny hetsipanoherany ireo mpiaro ilay klioba ary nivondrona teo akaiky teo ireo vondrona tena nasionalista hiringiriny Georgian March sy Georgia Idea.
Famoriambahoaka valinkafatryu ny avy amin'ny farany ankavanana nisy teo akaikin'ny Kianjan'ny 9 Aprily rehefa avy nosakanan'ny polisy tsy handeha eny amin'ny parlemanta izay misy ny hetsi-panoherana #Bassiani #CafeGallery
Tamin'ny 13 May, nifamory ireo vondrona farany havanana ho an'ny famoriana valinkafatra. Miampanga ireo toerampandihizana amin'ny alina ry zareo ho toerana ho an'ny fihinanana zava-mahadomelina ary fibolilàna ara-pananahana. Nihira ny hirampirenena izy ireo, niteny ratsy ary niezaka ny hanafika ara-batana an'ireo mpifety. Sary avy amin'i Giorgi Lomdaze ho an'ny Eurasianet.
Mifanipaka lavitra ny fanaon'ireo vondrona mpifanandrina, hatramin'ny ideolojiany, miaraka amin'ny hoe akanjo miloko marevaka sy kavina no manjaka eo amin'ny vondrona iray raha volo tsara tapaka kosa ho an'ny iray. Mivazavaza teny mandratra sy ompa mankahala ny olona mpitia mitovy fananahana, niezaka im-be dia be ny hamaky ny fefin'ny polisy ny tanora avy ao amin'ny farany havanana raha mandihy sy mandefa hira elektronika ny ilany hafa ho fandranitana.
Mivazavaza ny sasany ao amin'ny vondrona nasionalista : “Bassiani, Mbay Ta#y [ompa] ! Tsy misy afa-tsy olona mpivarotra zava-mahadomelina fotsiny, mpivarotena sy mpitia mitovy fananahana ry zareo ireo”, hoy ny mpikatroka iray avy ao amin'ny farany havanana mitondra sarontava tamin'ny Eurasianet teny an-toerana.
Filaharana polisy tsotra sy mpandrava korontana no nanao rindrina olona manasaraka ireo famoriambahoaka roa tao amin'ny Lalàna Rustaveli afovoany. Nampiasa fiara fitaterambahoaka ireo polisy mba hanaovana fefy fanampiny ary nanampy kamiao mpanondraka rano raha sanatria lasa mahery vaika ny fifandonana.
Samy nijanona nitàna ny toerany ny tsirairay raha tsy tonga i Gakharia, minisitry ny atitany , niseho taorian'ny 12 ora alina mba hiala tsiny noho ny herisetra tafahoatra nampiasaina tamin'ireo bemidina nataon'ny polisy teny amin'ny klioba.
“Aleo hatomboko amin'ny fialantsiny”, hoy Gakharia, niteraka tehaka nirefodrefotra avy amin'ny famoriambahoaka ankilany raha fimenomenomana kosa avy amin'ny iray hafa. “Miala tsiny aho tsy ho an'ny tenako ihany, fa amin'ny anaran'ireo manampahefana avy ao amin'ny ministeran'ny atitany izay mety nanafintohina anareo na mety nitondra ny tenanareo ho tandindonin-doza ny zavatra nataony”, hoy izy, nanosoka hevitra ny hitalapetraka hiresaka amin'ireo mpanohitra mba hiresahana izay fomba hanavaozana ny lalàna fanasaziana ny fihinanana zava-mahadomelina eo amin'ny firenena.
Nanaiky ny hiparitaka ireo mpikamensona saingy nanana olana ny polisy ny hiarovana ny fivoahany am-pitoniana. Lasa nahery setra be ireo vondrona mahery fihetsika, nanohitra ny polisy ary nikiaka fandrahonana.
Niverina ny filaminana nony farany saingy mbola mipetraka ny fanontaniana momba ny fampiasana ny zava-mahadomelina – nanome tohy ireo mpikambana avy amin'ny parlemanta fa afaka roa herinandro dia hampiditra lalàna vaovao momba ny hantsana ara-kolontsaina tsy mitsahatra mitombo sy ny zava-mahadomelina